Nhau - Kupatsanura uye hunhu hwemaski muchina
Yakazara otomatiki yekugadzira maski muviri muchina, kusanganisira kudyisa, epurasitiki tambo yerudzi rwealuminiini kupinza / kubvisa, kusarudzwa kwenzvimbo, ultrasonic fusion, slicing uye zvichingodaro, iyo kugadzirwa kwakanyanya kwazvo, inogona kuburitsa 1-200 zvidimbu paminiti. Iyo huru simba frequency kutendeuka nekumhanyisa mirau inogona kukurumidza kana kunonoka. Masiki akasiyana anogona kugadzirwa nekushandisa zvakasiyana zvigadzirwa. Izvo zvigadzirwa zvine maviri kana matatu marara, uye chigadzirwa chigadzirwa chakatsiga, iko kuvhiya kuri nyore, ruzha ruri pasi, uye nzvimbo yepasi idiki. Zvishandiso zvinoshanda: spunbonded filament isina-yakarukwa machira, 16-30g / m2, inokodzera kugadzirisa masiki anoraswa.
Hot wokudhinda Kuumbwa: iyo masiki mbishi zvinhu (isina-yakarukwa jira) uye chimiro chinopisa kudzvanya (mukombe chimiro). 1. Kusanganisira otomatiki kudzoka kwekuita uye yekudyisa furemu; 2. Kugadzira chidimbu chimwe chemasiki mana nguva imwe neimwe.
Slice: yaishandiswa kugadzira rukoko rwekunze (rwekuchengetedza) yekapu mask. Iyo yakakosha chiwanikwa simbi zvinhu zvinoshandiswa kugadzira maruva vhiri. Iyo banga inopfeka-isingagadzirike uye ine hupenyu hwakareba hwehupenyu. Iyo eccentric yakakosha mhando gadziriso inochinja, inokurumidza uye yakakwirira nhanho. Uchishandisa ultrasonic wave uye yakakosha simbi vhiri kugadzira, iyo micheto yejira haizokuvadzwa, hapana chikonzero cheku preheat kana kugadzira pasina burr, uye inogona kuvhiyiwa ichienderera.
Blank holder: tinya zvemukati nekunze materu eiyo mask
Kucheka: shandisa pneumatic stamping kuti ubvise iyo yakawandisa kumucheto kwemask.
Welding of kufema vharafu: Welding mweya mweya vharuvhu
Welding nzvimbo: 130mm
Kurumidza: 20-30 / min
Iyo yakasanganiswa dhizaini yemuchina muviri inotora iyo yekuchengetedza kugadzirisa chiyero kudzora; iyo komputa yakangwara kutonga inogona kuzadzikisa kurongeka kwechiuru chimwe chechipiri; iyo mold padanho rekugadzirisa, iyo fuselage mota inoerekana yakwira nekudzika, uye hwaro hwakachinjika kugadziridza.
Nzeve bhendi gwapa Welding muchina: kumhanya: 8-12 zvidimbu / min. inogona kushandiswa kutenderera nendege, yemukati nzeve bhandi / yekunze nzeve bhandi, yakajairwa maski, dhadha muromo mhando uye mamwe akakosha-akaumbwa mamask. Mushure mekugadzirwa kwemasikisi, bhandi renzeve rakasungwa nemaoko
Ultrasonic yemukati nzeve bhendi mask muchina inoshandisa iyo ultrasonic kutenderera nzira. Kana iyo mask ichiendeswa kunzvimbo yekugadzirisa, iyo ultrasonic wave ichave inogadzirwa otomatiki. Kudedera kweiyo micro amplitude uye yakakwira frequency ichaumbwa pane bhandi renzeve, uye inozoshandurwa kuita kupisa ipapo ipapo. Izvo zvinoshandiswa kuti zvigadziriswe zvichanyungudika, uye bhandi renzeve rinonamirwa zvachose kana kuiswa mukati memukati memukati memaski muviri. Iyo nzira yekugadzirisa yekugadzirwa kwemukati nzeve bhendi mask, iyo inongoda chete opareta Iyo maski muviri unoiswa mumask disc chidimbu nechidimbu, uye chiitiko chinotevera chinozoitwa otomatiki nemidziyo kudzamara chigadzirwa chapera chapera.
Kushanda maitiro: (mask muviri) yekudyisa manyore → nzeve bhandi otomatiki kudyisa → Ultrasonic nzeve bhandi kutenderera → isina-yakarukwa jira kumucheto kudyisa uye kuputira → Ultrasonic divi bhendi kutenderera → kudivi bhandi rekucheka → apedza chigadzirwa kuburitsa → kuverenga → apedza chigadzirwa kuisira → kuendesa neyakafambisa bhandi mudziyo
Kupeta maski muchina
Kupeta maski muchina, inozivikanwawo seC-mhando masiki muchina, muchina wakazara otomatiki wekugadzirwa kwekupeta mask muviri. Iyo inoshandisa ultrasonic tekinoroji kusungira 3-5 zvidimbu zvePP isina-yakarukwa machira, yakamisikidzwa kabhoni uye firita zvinhu, uye inodimbura iyo yekupeta masiki muviri, iyo inogona kugadzirisa 3m9001, 9002 uye mamwe maski miviri. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana mbishi dzinoshandiswa, masiki anogadzirwa anogona kusangana nemhando dzakasiyana senge ffp1, FFP2, N95, nezvimwewo iyo tambo tambo inokwenenzvera isina kurukwa jira, izvo zvinoita kuti nzeve dzeanomubata dzive dzakanaka uye dzisamanikidzike. Iyo firita jira jira remaskiri ine yakanaka yekusefa maitiro, ayo anokwana zvakakwana iyo Asia kumeso chimiro, uye inogona kushandiswa kune yekuvaka, kuchera uye mamwe epamusoro kusvibiswa maindasitiri.
Mabasa uye maficha:
1. Inogona kugadzirisa 3m9001, 9002 uye imwe yekupeta mask muviri, iyo inogona kupedzwa kamwechete.
Dhadha muromo maski muchina
Yakazara otomatiki ultrasonic dhadha muromo maski muchina (dhadha muromo masiki kugadzira muchina) muchina unogona kuburitsa dhadha muromo masiki yeakanyanya kusvibisa indasitiri nekushandisa musimboti weiyo ultrasonic isina musono kutenderera. 4-10 zvidimbu zvePP isina-yakarukwa machira uye firita zvinhu (senge yakanyungudutswa jira, yakamisikidzwa kabhoni zvinhu, nezvimwewo) inogona kushandiswa mumuviri wemuchina masiki, kuitira kuti ibudise zvigadzirwa zvakapedzwa zvemhando dzakasiyana dzekusefa dzakadai. seN95, FFP2, nezvimwewo Uye muchina uyu une yakakwira michina, kubva pakudyisa kusvika kumagumo zvigadzirwa tambo yekushandisa otomatiki: mbishi zvigadzirwa otomatiki kudyisa, yakazvimirira mhuno mutsetse irikutaridza system, uye inogona otomatiki kupeta mhino mutsetse mune isina-yakarukwa jira, otomatiki kupeta uye apedza chigadzirwa kucheka, uye anogona otomatiki kuwedzera kufema vharafu gomba. Chigadzirwa chakaburitswa nedhaki muromo chifukidzo muchina une chitarisiko chakanaka, kugadzikana kuita, goho repamusoro, chiyero chakadzikira uye kushanda nyore
Zvimiro zve duckbill mask muchina:
1、 Otomatiki kudyisa system
2、 Folding maitiro
3、 Ultrasonic kupisa chisimbiso system
4、 Mushini wese une kugadzikana mashandiro, inoramba ichigadziriswa yekumhanyisa yekumhanyisa, yakakwira kugadzirwa kushanda, inosvika makumi matanhatu zvidimbu paminiti, iri nyore uye yakajeka kuverenga, yakakwira mashandisirwo mwero wezvinhu zvakagadzirwa, yakapusa uye iri nyore mashandiro uye kugadzirisa, yakakwira degree of automation, uye inoshanda kuderedzwa yemutengo webasa.
hosipaipi yekuchina muchina, asiri dzakarukwa kumeso chifukidzo kugadzira muchina, kumeso mask kugadzira muchina, kuvhiya chifukidzo kugadzira muchina, asiri rakarukwa chifukidzo kugadzira muchina, kuvhiya kumeso mask kugadzira muchina,